यस्तो छ गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्नुको फाइदा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । अनिच्छित गर्भ बस्नबाट रोक्नको लागि सेवान गरिने गर्भनिरोधक चक्की गर्भ रोक्नमा मात्रै सिमीत हुँदैन् । यसको सेवनले महिनावारी रोक्नुको साथै पिम्पल्सको समस्याबाट समेत टाढा राख्छ । अनिच्छित गर्भ रोक्नेको लागि प्रयोग गरिने अन्य उपायहरु भएपनि प्राय धेरैले चक्की नै सेवन गर्न रुचाउँछन् । त्यसो त गर्भ रोक्ने पनि दुई प्रकारको उपायहरु रहेका छन् । हर्मोन र नन हर्मोन ।
हर्मोनल औषधीको प्रयोगले हर्मोन परिवर्तन गरेर गर्भ रोक्न मद्दत गर्छ भने नन हर्मोननलमा कपर्टी, कन्डोम लगायतका गर्भ निरोधक अस्थाई साधनकमा प्रयोग गरिन्छ जसले गर्भ बस्न रोक्छ । तर महिलाले यसको सट्टामा नन हर्मोनल औषधीको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर नन हर्मोनलको तुलनामा हर्मोन औषधीको प्रयोग गरिन्छ । यस्तो औषधीले गर्भ रोक्न मात्र नभएर अन्य कार्यको लागि समेत फाइदा पुर्याएको हुन्छ ।
मासिक धर्मलाई नियन्त्रण राख्दछ : महिनावारी ढिलो हुनुमा हर्मोनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महिनावारी भएको बेला अत्याधिक रक्तश्राव भएमा वा महिनावारी अनियमित भएमा गर्भनिरोधक चक्कीको सेवनले यसलाई नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्छ । २८ वटा चक्की रहेको गर्भनिरोधक चक्कीको प्याकेटमा २१ वटा सक्रिय चक्की हर्मोन सहित रहेको हुन्छन् भने यदि निस्क्रिय चक्की प्रयोग गरेमा महिनावारी हुने गर्छ । सरी सक्रिय चक्कीको प्रयोग गरेर भएपनि महिलाले महिनावारी भएको बेला सक्रिय चक्कीको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसको सेवनले पोलीसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम पिसिओएस लाई निको पार्छ ।
हर्मोनल एक्ने सफा गर्छ : हर्मोनमा भएको समस्याको कारण आउने पिम्पल्सलाई गर्भनिरोधक चक्कीको सेवनले रोक्छ । गर्भनिरोधक चक्कीमा पाइने एस्ट्रोजेन वा प्रोजेस्टेरोन नामको हर्मोन हुने भएकाले यसको सेवनले हर्मोनलाई नियन्त्रण गरेर पिम्पल्सको समस्यालाई हटाउँछ ।
महिनावारी सम्बन्धि दुखाईबाट छुटकारा दिलाउँछ : गर्भ निरोधकको लागि ३१ प्रतिशत महिलाले चक्कीको प्रयोग गर्ने गरेको एक अनुसन्धानले बताएको छ । महिनावारी भएको बेला पाठेघरले प्रोस्टेग्लैडिंग नामको हर्मोन श्राव हुने भएकाले महिनावारी हुँदा बढी पेट दुख्ने गर्छ । यस्तो हर्मोनले गर्भासयलाई संकुचित बनाउने गर्छ । जसको कारण महिनावारीमा क्राम्प्स हुने हुन्छ ।
यस्तो चक्की खानाले ओभ्युलेसन कम हुने र प्रोस्टेग्लैडिङ्गको श्राव कम हुन्छ । हरेक महिना महिनावारी हुँदा महिलाको शरिरबाट एउटा अण्डा निस्केर गर्भासयसम्म पुग्छ । जब यस्तो चक्कीको प्रयाग हुन्छ । त्यो बेलामा अण्डा आउँदैन् जसले गर्दा गर्भासयमा क्राम्प्स हुँदैन् र पेट दुख्ने समस्या हट्छ ।
गर्भाशयको क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ : एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन नामक संयुक्त हर्मोनको सेवन गर्नाले गर्भासयमा क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसको असर २० वर्ष सम्म पनि उस्तै रहिरन्छ । डिम्बासयमा हुनसक्ने क्यान्सरबाट समेत बचाउँछ ।
रक्तअल्पत्राको जोखिम कम हुन्छ : महिनावारीको समयमा हुने उच्च रक्तश्रावको जोखिमलाई यसले रोक्छ । रक्त अल्पता भएमा अक्सिजनका आपूर्ति गर्ने हेमोग्लोविनको मात्रालाई कम गर्छ । हर्मोनयुक्त गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्दा अत्याधिक हुने रक्तश्रावलाई रोक्छ र रक्तअल्पतालाई पनि रोक्छ ।
पूर्व राजाको छायाँबाटै सांसदहरु आतंकित ! राजपरिवारमा झगडा ?
काठमाडौं । २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले नै २४० बर्ष पुरानो राजतन्त्र समाप्त पारेको थियो । अन्तरिम संविधानले…
‘आमा वृद्धा आश्रममा’ भन्ने यो शब्द सुन्दै ज्यादै निरस लाग्छ । अनि भावना र कठोरताको गहिराईको मापन गर्न तिब्र इक्छा…